The Elementary Experience (Beta) 2: Valifaty | Avy amin'ny Linux
The Elementary Experience (Beta) 2: Valifaty
elruiz1993 | | Fisehoana / personalization, Fitsinjarana, GNU / Linux
Salama, elruiz1993 aho, angamba tadidinao aho avy amin'ny Classics tahaka Pantheon: Ny traikefa fototra y Ahoana ny fomba ahazoana WiFi (karatra Broadcom 43XX) amin'ny Debian sy ny derivatives tsy misy fifandraisana Internet. Manararaotra ny Moonrise (beta 2) ary tsy nisy nanoratra teny momba izany tao amin'ny DesdeLinux, holazaiko anao ny niafarany tato anatin'ny andro vitsivitsy.
Ny Linux 1% dia lainga
ElementaryOS Luna no andiany manaraka an'ny OS avy amin'i Daniel Foré sy ny ekipany. Miorina amin'ny Ubuntu 12.04 LTS izy io ary tsy mitovy amin'ny razambeny amin'ny fanolorana tontolo iainana haingana, azo antoka, hazavana ary ambonin'izany rehetra izany, tontolo mahafinaritra. Na ny fampiharana azy, ny sary masina ary ny birao dia samy manana ny fahazavana, ny fiasan'izy ireo ary ny tsiro tsara tadiavin'ny rafitra miasa hafa.
FAMPITANDREMANA: Ity lahatsoratra ity dia manolotra rafitra fiasa amin'ny beta, koa raha te hizaha toetra azy ianao dia mety hianjera na hanakatona ny fampiharana tsy ampoizina. Ny fampiasana maharitra dia mety miteraka fiankinan-doha.
Ao amin'ny solosaina findrako taloha (Intel Core 2 Duo, 3GB RAM, 500GB HDD, Integrated Intel) dia tsy naka mihoatra ny 20mins vao vita ny fametrahana. Tamin'ny famerenana indray dia hitako fa nahafantatra ny fisarahanako tamin'ny Windows 7 tsy nisy olana izy ary nitondra ahy ho eo amin'ny birao birao vonona ny hanao ilay fitsapana, afa-tsy ny pitsopitsony manelingelina foana an'ny Wifi (izay namboariko noho ny lahatsoratra teo aloha). Avereno indray ary andramo 🙂
Tongasoa eto amin'ny Pantheon (Indray)
Amin'ny ambaratonga famolavolana ankapobeny, tsy dia niova firy: Mbola manana Wingpanel (tontonana ambony), Plank (Dock) ary Slingshot (Application Launcher) izahay.
Fampiharana tsy misy fampiasa
Raha tsorina dia manana Pantheon Files (alohan'ny Marlin) ho mpizaha rakitra izahay, Music (alohan'ny Noise) ho mpilalao mozika, horonantsary (alohan'ny Totem) ho mpilalao horonantsary, Geary ho mpitantana lahatsoratra, Software Center (tsy misy tohin'ny Ubuntu ary miaraka Vonona ny hisintona), Scratch toy ny tonian-dahatsoratry ny lahatsoratra ary Switchboard amin'ny maha-Configuration Manager.
Ny mpizaha rakitra dia manana ny safidy mahazatra (mitazona sy misaraka ny fizarana, mandamina rakitra, mofo, sns). Ny tiako dia ny tabilao fananana vaovao, miaraka amina fomba sy toetra maro. Manaraka izay mety sy ilaina.
Pantheon Files mampiseho ny toetran'ny fampirimana horonan-tsary
Tsy toy ny seho eponymous izay mahandro sakafo GNOME ho an'ny 3.10, Ny mozika dia manolotra fomba tsy dia misy "revolisionera" fa tena azo ampiharina sy mahafinaritra. Taorian'ny fametrahana ireo fonosana fananana dia namerina ny famoriako tsy nisy olana. Tsy toy ny tamin'ny farany, ankehitriny samy miasa ny ekisiterany sy ny fanalahidy multimedia. Tsy mila ampiana bebe kokoa amin'ity rindranasa ity aho raha tsy mila manala baraka azy noho ny fanesorany ireo rakotra rehetra tao anaty rakikirako tsy nisy antony mazava.
Raha ao anaty mazoto kanto rakikira ianao ary tsindrio ny iray dia ho hitanao ny safidy hilalaovana ilay hira tianao amin'ny boaty pop-up lehibe ananany.
Ny mpilalao haino aman-jery GNOME dia mbola miasa tsy misy olana raha vao mametraka ny codecs marina ianao, saingy satria efa zatra ny malalako Gnome-Mplayer aho dia nesoriko.
Gnome-Mplayer dia mampiseho amintsika hoe toa manao ahoana ny lohahevitra GTK vaovao amin'ny fampiharana an'ny antoko fahatelo, ny sary maroloko ho an'ny famerenana video, ary ny fahendren'i Gin-san
Araka ny efa noresahiko tao amin'ny lahatsoratro teo aloha, ity dia iray amin'ireo programa ninoako indrindra, satria mpitantana fanahafana manerantany sy manitatra ho an'ireo rehetra te hampiasa azy io. Hatreto dia ny rindrambaiko tokana nanararaotra azy dia ny Plank, izay misaotra ny Switchboard dia manana fomba sary mazava sy tsotra hanamboarana ny haben'ny sary masina sy ny lohahevitry ny Dock.
Plank fanovana tanana? Tsy miambina ahy
Famaranana: Elemental, Watson malalako
Ireo mpampiasa veteran na mpankafy marimaritra iraisana amin'ny desktop dia mety hahita azy io ho birao feno safidy azo ampiasaina, tsy manana safidy manokana ary tsy manana fampiharana manan-danja na feno kokoa, fa ho antsika izay mampiasa Linux ho an'ny mora sy hafainganana dia lafo be. Birao iray miorina amin'ny teknolojia ankehitriny izy io, natao tamim-pitandremana be sy fomba fanao tsotra izay tiako manokana.
Fantatro fa misy ny rindranasa izay tsy notadiaviko, koa manasa anao aho hameno ny lahatsoratra ary hizara ny hevitrao amin'ny hevitra.
Loharano sy sintomina: elementosOS
temotra: Stight Fright (2560X1440p)
Gnome-Mplayer maka sary an'i anime: Gintama
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fisehoana / personalization » The Elementary Experience (Beta) 2: Valifaty
53 hevitra, avelao ny anao
Tena tsara ny latabatrao. Hofaranako ny fampidinana an'i Debian Wheezy hametrahana azy amin'ny XFCE satria ny GNOME 3 dia hihinana ilay horonantsary 32MB amin'ny karatra S3 ahy.
Tsy haiko, ho an'ny solosaina manana herinaratra ambany toy izany, ny Openbox misy tint2 na LXDE dia tsy mety aminao? Miarahaba sy misaotra anao namaky
Ny LXDE dia mediocre amin'ny fanaingoana; ny OpenBox dia tsy nokasihiko tsara izy io, fa ny XFCE no akaiky indrindra amin'ny GNOME 2 raha ny fanjifana fitaovana sy fitaovana manokana.
Andraso aho mandra-piorenan'ny distro tanteraka.
Notsapaiko tsara izy io ary ho an'ny mpampiasa "matanjaka" an'ny rafitra fandidiana dia tsy mandeha izy, notsorina ho mora kokoa ny interface graphique.
Amin'ny alàlan'ny fananana ny Ubuntu 12.04 LTS ho toy ny fotony ihany koa, izay tsara ho an'ny mpizara sy ny tontolon'ny orinasa fa tsy ny tontolo iainana hafa, dia miraikitra amin'ny rindranasa prehistorika ianao - na dia tsy mitovy amin'ny an'i Debian aza.
Azo antoka fa afaka manampy PPA ianao ... ary amin'izay no manomboka ny fifanolanana, ny olan'ny fitoniana ary mazava ho azy fa manadino hanao fanavaozana azo antoka sy mangina amin'ny famoahana ny rafitra manaraka.
Ny fampidirana PPA amin'ny LTS dia saika tsy misy dikany? Fomba fanao mifanohitra amin'ny hevitry ny LTS io.
Ny fizarana sary dia lohahevitra iray hafa tanteraka: mpankafy tsy misy fepetra aho 🙂
Izaho dia manana ny KDE (amin'ny Chakra) namboarina tamin'ny fampiasana ireo maodelin'ny Elementary Luna, QtCurve ary Aurorae hita ao amin'ny kde-look.org.
KDE bebe kokoa estetika ambaratonga OS: hery sy malefaka mifanentana amin'ny hatsarana sy ny endrika. (Tsy manana mpitsangatsangana aho!)
"Ankoatry ny fanananao ny Ubuntu 12.04 LTS ho toy ny fotony, izay tsara ho an'ny mpizara sy ny tontolon'ny orinasa fa tsy ny tontolo hafa, dia tafiditra ao anaty fampiharana prehistorika ianao ..."
Satria tsy mampiasa Ubuntu ianao, marina?
Tsy misy koa i Debian.
Nampiasako azy io isan'andro tany am-piasana, na tamin'ny fametrahana birao na amin'ny mpizara anatiny amin'ny fametrahana tahaka ny nataoko tamin'ireo orinasa kely sy salantsalany ary koa tany am-piasana hatramin'ny fivoaran'ny orinasa niasako dia natao tao amin'ny Ubuntu.
Mihoatra ny fetran'ny rafitry ny rafitra sy fanavaozana ny fampiharana ny Ubuntu, ny fandavanao fa ny PPA dia fiterahana ary aretin'andoha BIG dia satria tsy nampiasanao azy ireo lalina.
Hatramin'ny fotoana ampidiranao PPA dia very fitoniana sy fanohanana ianao, na dia fampiharana kely indrindra sy tsy mampidi-doza aza izany, raha tsy hiteny afa-tsy ny fandinihana ny PPA tsirairay rehefa manavao kinova vaovao amin'ny rafitra, raha mbola satria tsy manafatra ny zava-drehetra ianao ao amin'ilay fanavaozana voalaza.
Mazava ho azy fa tsy mampiasa Ubuntu aho, fantatro tsara 😀
Ary tsy milaza izany amin'ny fomba manambany aho fa amin'ny fomba azo ampiharina tanteraka, ny Ubuntu no fizarana voalohany ahy ary tiako ny amin'izany, raha ny marina dia misaotra azy aho fa nisy olana foana io raha te-hikasika ny rafitra fototra nanomboka tamin'izay nanosika ahy hitady faravodilanitra vaovao 🙂
Mikasika ny lesbiana, ny malalako elav, ary avelako ny tanjony ho tonga universal, vondrom-piarahamonina ary fizarana maimaimpoana, tanjona tena mendri-piderana ary anarahako izay iarovako nify sy hoho an'i Debian, araka ny efa nanehoako hevitra tamin'ny fotoana maro , ny fizarana dia misy lesoka _fundamental_ toy ny fikirakirana miharihary ny fonosana any ambony mba hanitsiana azy ireo amin'ny fomba fananganana rafitra fiasa GNU + Linux: amin'io lafiny io ihany no mahatonga ny Debian hampiasa dia ny vondrom-piarahamonina manaitra izay ananany sy izay "manara-penitra" ny quirk izay itondran'ilay distro fonosana ambony.
Ho ahy, mamindra ny mpizara rehetra any amin'ny Fedora aho, izay manaja ny fenitra ambony sy ny fampiasana -ny zava-misy dia lohalaharana amin'ny fitaovana maoderina toy ny systemd, izay manamora ny fitantanana ny distro.
Raha hitako fa manahirana tokoa ny tsingerina 13 volana hampiasana ny distro amin'ny mpizara, dia mila mifindra any amin'ny CentOS aho ary hijery ny fomba ahafahako mampiasa rindrambaiko ankehitriny - satria ilaiko izany.
* asa miasa puff
Tena ratsy ny nanoratana ny fehintsoratra voalohany, hahitana raha zatra mijery ny zavatra nosoratana alohan'ny andefasana azy xD
Tsy fantatro, raha ny marina dia toa famerenana indray ny ubuntu 12.04 :(, amin'ny fampiasana ny fijery gnome miaraka amina fanovana vitsivitsy, midika izany fa mihinana ny bibikely rehetra amin'ny libmutter 3.4 ianao ... ary tsy mampihomehy mihitsy aho. Ny faharoa ..., dia Tsy dia manintona an'ity distro ity aho, satria mampirehitra ny macbook aho (ataoko tsinontsinoavina izany) ary voila…., Farafaharatsiny mba hanana osx tena izy, miaraka amin'ireo iTunes, miaraka amin'ny Safari sns xD
Tsy azo atao ilay libmutter, tsy noresahiko tao amin'ny lahatsoratra izany satria (heveriko) hoy aho tamin'ny lasa: nanamboatra Gala ho varavarankely sy mpitantana ny vokatra i Gala mba tsy hihinana ny olan'ny Gnome-Shell. Misaotra namaky 🙂
gala dia tsy inona fa ny fork libmutter, tsy injeniera amin'ny effets graphique sy zavatra hafa izy ireo, noho izany dia azonao antoka fa ireo olana mitovy amin'ny libmutter 3.4 dia ao amin'ny gala ihany koa.
miala tsiny, manitsy ny tenako aho
Navoaka 31 herinandro 2 andro lasa izay
Gala tsy fork an'i Mutter. Ny Gala dia mampiasa fotony mitovy amin'ny Mutter (libmutter) fotsiny.
Nampidiriko ny VLC sy XFCE4.10 PPA tamin'ny LTS kahie ary vatosoa izy io.
Mazava ho azy, izany no antony nanasongadiko azy tamin'ny famaranana, fa ho an'ny iray amin'ireo mpampiasa mampiasa solosaina hidirana amin'ny Internet, mijery sarimihetsika ary manao asa indraindray (angamba 70% amin'ny mponina) dia mifankatia isika. Ity rafitra ity dia natao ho an'ny olona iray izay tsy te hanasarotra ny fiainany mihoatra ny mametraka ireo codecs (izay tonga toy ny fenitra). Misaotra naneho hevitra 🙂
elruiz1993: amin'izao fotoana izao dia manoratra izany avy amin'ny solosainan'ny rahavavavavavavaviko izay nametrahako ny beta 1 an'i Luna aho ary manohy manavao hatrany io fotoana io tsy misy olana (mandondona amin'ny hazo!).
Toa tena mahafinaritra ahy izany fa ny fampiasa voafetra ao amin'ny birao dia kely loatra amiko ka dia nandika zavatra maro tamin'ny KDE aho ka tsy ovako na inona na inona!
Manaraka tanteraka ny hevitrao aho: ho an'ireo olona tsy IT marobe izay mampiasa PC, ny OS fototra dia manarona ny filany sy ny fitakiany.
zyxx dia hoy izy:
Valio i zyxx
Andian-tsarimihetsika tena tsara, misy hetsika, hatsikana, andian-teny malaza ary mahery fo hypoglycemic. Ratsy loatra ny fizaran-taona farany fa ho foanana noho ny isa ambany. Misaotra naneho hevitra 🙂
Ubuntu 12.04 dia efa eo amin'ny fanavaozana ny fikolokoloana faha-3 ary ny Elementary dia mbola tsy ao amin'ny kinova famaranana ... ary miorina amin'ny Ubuntu 12.04, na dia amin'ny 12.04.1 aza !!
mandre! izay mampiasa ny tahirin'ny ubuntu 12.04, miaraka amin'ny fanavaozana sudo apt-get, dia efa manana ny kinova farany ubuntu xD ianao
Raha ny marina tsia, miaraka amin'ity baiko ity izay ataonao dia manavao ny lisitry ny fonosana avy any amin'ny repos.
Raha tsy fantatrao izany dia tsy misy antony tokony hanazavana ny fahasamihafana misy eo amin'ny LTS sy ny dikan'ireo kinova mpanelanelana.
Hey, na iray, na troll ianao, na roa, tsy hainao ny mahatakatra fa ny Ubuntu 12.04.1 sy 12.04.2 sns, dia zavatra mitovy ihany, miaraka amin'ny hany fahasamihafana izay havaozina 12.04.2, dia toy ny sary vaovao, tsy misy zavatra hafa, azonao atao ny manavao azy amin'ny sudo apt-get update na sudo apt-get dist-upgrade ary mahazo kernel 3.5 ianao. Ary efa manana ny kinova vaovao ianao, hitanao fa ubuntunero xDDDDDDDDDD ianao
* eny, te-hanoratra fanavaozana sudo apt-get aho
Ao amin'ny Debian, ny fanavaozana ny rafitra dia feno tsipiriany kokoa, satria asehon'izy ireo aminao izay fonosan'entana havaozina, miampy ny azo antoka fa azo antoka kokoa ny manao ny fanavaozana amin'ny fisafidianana tsy misy afa-tsy ireo rakitra hanavao ny kernel sy ilay rakitra kinova manavao.
@DanielC @ pandev92 Raha ny marina, ny Ubuntu dia mitovy amin'ny Mandriva amin'ny fonosana .rpm miadana (fanodinana fonosana lousy). Na izany na tsy izany, ny zavatra tsara momba ny repo Ubuntu LTS dia ny fampiasan'izy ireo ny kinova Debian izay hisehoany ho Stable, ary izany dia mahatonga ny mpisera Debian hanana fonosana vaovao.
pandev92, manomboka mamaly ny hevitro ianao ary na dia misy lesoka aza, tsy vao sambany io, ary toa tsy ho ny farany, ary antsoinao ho troll aho?
Ny fahalalanao henatra dia goavambe, lehibe noho ny olanao amin'ny famakiana sy ny fahalalana izay tsikerainao.
aza miady ry zalahy fa vondrom-piarahamonina isika!
0 tohan-kevitra :), saingy misy milaza ianao fa tsy fantatro ny momba ny fanavaozana ny distro iray ka hatramin'ny iray hafa, toa ny 12.4.1 sy 12.4.2 dia distro roa samy hafa, izay vao mainka tsy mahomby. Tehaka
Raha te hitomany ianao izao dia afaka mandeha ary manaparitaka deblinux-
Ny tena fanavaozana apt-get dia ny fanavaozana ireo loharanom-pahalalana repo fa tsy zavatra hafa. Ny zavatra fanavaozana ny kernel dia mety maharitra 100 na 200 megabytes, arakaraka ny maha-zava-dehibe ny fanomezana ilay fanavaozana.
Raha manadino ny fametrahana fanavaozana sudo apt-get aho, aorian'ny fanavaozana ny sudo apt-get, fa amin'ny ankapobeny raha manao fanavaozana ny sudo apt-get ianao ary manidy ny terminal dia hiseho eo amin'ny firaisankina ilay sary masina, milaza aminao fa manana fanavaozana x ianao.
Tahaka ny ubuntu dia manome ahy olana izy hatramin'ny nametrahako ny mpamily nvidia rehefa averiko indray fa mainty ny lamba <_
Elementary no iray amin'ireo distro tiako indrindra. Nomeko ny rahalahiko sy ny reniko handatsaka varavarankely amin'ny alàlan'ny fanaovana kaonty azy ireo amin'ny fototra XD
Raha ny fanazavana, nanova ny loaka izy ireo tamin'ny fanavaozana farany, ankehitriny dia miasa kokoa izy io. Manantena aho fa hanao zavatra mitovy amin'ny tabataba sy ny mpihaino izy ireo.
Amin'ny lafiny iray: ohatrinona ny versionitis! Ny rindranasa rehetra ampiasako matetika dia havaozina amin'ny kinova farany (misaotra ny ppa) ary milamina ny rafitra misy ahy.
Fantatro, tamin'ny fotoana rehetra nampiasako azy, tsy nisy programa nanararaotra ahy. fa satria amin'ny fanjakana beta dia tsy maintsy atao ny fanazavana.
stooges dia hoy izy:
Ny OS ambaratonga dia zavatra tsy mitombina. Maty ny PC rehefa avy nametraka azy, tsy nipoitra ilay grub. Ampiasao ny supergrubdisk hanamboarana azy ary hahazoana fidirana. Taorian'ny fidirana dia nahatratra OS aho fa ny 2 × 3 dia nanome lesoka tamiko. Nanapa-kevitra ny hametraka indray aho ary tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy nanome olana ahy ny grub, saingy mbola tsy marin-toerana ihany. Hafatra hadisoana, misintona fotsiny ny totozy mihoatra ny Plank hanakanana ny fitaovana, sary masina sy fijery ratsy sns sns. ElementOS dia distro tsara tarehy, saingy miadana be ny fivoarany. Miandry azy aho hatramin'ny nanambarana azy, na dia ampiasao ny Jupiter, ny isan'andro manangana ary ny beta ankehitriny. Fantatro fa ny PC-ko dia tsy famaranana farany ary fantatro ihany koa fa mbola ao anaty beta izy ireo, saingy tokony efa nanana fitoniana kely kokoa izy ireo. Manana intel i5 + 4GB ram + 600GB HD aho.
"Salama, Troy McClure aho ..." hahaha
Hahaha, misy tohiny 2 hafa ao amin'ilay lahatsoratra
Lainga ilay manana mofomamy, sa tsy izany? 😀
Ary iray hafa
Elementary ry Watson malalako?
Tsia, tena miharihary izany
Tsy miambina ahy 😀
Ao amin'ny lohateny izy, sarotra kokoa io ary angamba tsy dia fantatra loatra
Ahh, raha liana ianao dia afaka mametraka ny kernel 3.8 amin'ny fanabeazana fototra
avy amin'ny repo? na avy amin'ny kernel .ubuntu .com / ~ kernel -ppa / mainline?
Ny famerenana, ity dia 3.5 sy 3.8
tena tsara ny fahamarinana tena tsara fa tsy miala amin'ny XFCE amin'ny Linux Mint aho ... maivana tokoa izany! 😀
avy eo ISO hafa indray no mivoaka amin'ny 12.04.x
Nampiasako azy io nandritra ny iray andro, ary toa tena tsara, ny marina dia fluid sy haingana izy io, na dia efa antitra aza ny fonosana, ny ankamaroany dia mitovy amin'ireo ampiasain'ny debian stable, toy ny gnome 3.4, kernel 3.2 , ary na ny kernel aza dia 1,11 (debian mampiasa xorg 1.12).
Diso aho, ny tiako holazaina dia hoe "na ny xorg dia 1.11" dia tsy ny kernel no tiako holazaina
amin'ny pc-ko feno dia feno na beta aza .. 🙂
Eny, efa nosedraiko izy io ary hijanona amin'ny solosaina findainy ihany, toy ny tifitra izany, marina fa tsy maintsy nampiasa dconf aho ho an'ny zavatra sasany teo amin'ny birao izay tsy naharesy lahatra ahy ary nibata ny fomba fanabeazana fototra lohahevitra, fa rehefa raikitra, tonga lafatra. Manantena ny kinova farany.
Blake89 dia hoy izy:
mamelà ny hadalana, fa azonao atao ve ny mametraka azy io hoe azafady ??. Misaotra 🙂
Valiny tamin'i Blake89
Mpampiasa mahazatra aho, ary nametraka an'ity rafitra fiasa ity aho mba hanome aina ny solosaina finday izay nametraka kapila matevina 64 gb.
Nieritreritra aho fa noho ny habakabaka dia nety tamiko, saingy amin'ny maha-mpampiasa mahazatra ahy dia tsy afaka mahita ny modely fanaovana kajy aho na mamaky ireo antontan-taratasy izay alaiko amin'ny mailako
Tsy afaka mijery horonantsary youtube koa aho.
Amin'ny maha-mpampiasa fototra ahy dia mitady rafitra miasa izay mora ampiasaina aho ary mahafeno ny zavatra ilaiko tsotra.
Guide Reaver. Fanitsakitsahana haingana ny WPA sy WPA2 haingana.
Ahoana ny fitanisana ireo fonosana AUR napetraka ao amin'ny Arch Linux